को’रोना स’ङ्क्रमित व्यक्तिसँग सम्पर्कमा आएका बालबालिकामा देखिन सक्छ ज’टिल रोग ! – Nepal Online Khabar
को’रोना स’ङ्क्रमित व्यक्तिसँग सम्पर्कमा आएका बालबालिकामा देखिन सक्छ ज’टिल रोग !
भाद्र १८, २०७८ शुक्रबार 299
काठमाडौं : को’रोना स’ङ्क्रमण भएको वा स’ङ्क्रमित व्यक्तिसँग सम्पर्कमा आएका दुईदेखि छ सातामा बालबालिकालाई ज्वरो आउने वा छालामा समस्या त आएको छैन् ?
सचेत हुनुहोस् अहिले बालबालिकामा ‘मल्टिसिस्टम इन्फ्लामेटोरी सिन्ड्रोम’ (एमआईएससी) जटिल समस्याका रूपमा देखिएको छ । को’रोना स’ङ्क्रमित भएको दुईदेखि छ साता रोग प्र’तिरोधात्मक शक्ति अनियन्त्रणका कारणले यस प्रकारको रोग बालबालिकामा लाग्ने गरेको विशेषज्ञहरूको भनाइ छ ।
कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक अजित रायमाझीले को’रोना स’ङ्क्रमित भएको बेला कुनै पनि लक्षण नदेखिए पनि निको भएको छ हप्ताभित्र एमआईएससी देखिन सक्ने जानकारी दिए । ज्यानसम्म पनि जान सक्ने यो जटिलतामध्ये एउटा ठूलो जटिलता रोग हो जुन अहिले नेपालमा पनि बढेको पाइएको छ ।
एमआईएससी भएका बालबालिकाका शरीरका विभिन्न प्रणाली र अङ्गहरूमा एकै पटक असर गर्ने हुँदा विभिन्न खाले लक्षण देखा पर्ने डा. रायमाझीको भनाइ छ । को’रोना भा’इरससँग लड्नका लागि बालबालिकाको शरीरले गर्ने प्रतिक्रियाका कारण एमआईएससी हुने उनले प्रस्ट पारे ।
Prevदेउवा किन ओलीसँग सम्बन्ध सुधार्न चाहन्छन् ?
Nextपर्वतमा पहिराेले पुरिएर ५ जनाको मृ’त्यु, ३ बे’पत्ता !
अमेरिका जान नक्कली शैक्षिक प्रमाण–पत्र बनाउने ६ जना प’क्राउ !
‘वडाध्यक्ष शैक्षिक विकास’का लागि रु १० लाख सहयोग गर्ने अध्यक्ष ओलीको घो’षणा !
अन्तरिक्षबाट फुटबल हेर्दै थोमस पेस्वेट